7 Kuhle Day Uhambo Kusukela Venice | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 7 Kuhle Day Uhambo Kusukela Venice
Njengoba zonke azi, Venice iyona kakhulu edolobheni oyingqayizivele ajabulisayo wonke kulo lonke elaseYurophu, uma kungekhona ukuthi emhlabeni wonke. AmaNtaliyane wenza ngokuphelele aphume yeNayile nazo amavesi encane, konke okuyizinto amanga esiqhingini. Lokhu uye waphenduka edolobheni ku yezindawo eziningi enhle eYurophu. Kodwa sonke siyazi ukuthi. Yini abaningi abazi iqiniso lokuthi kukhona ngaphandle ngaphezulu Venice. That is why we wanted to prepare a list of some of the best day trips from Venice. Ngeke udumazeke abangahlanzekile nganoma iyiphi yalezi izindawo indawo. Ngakho, uma abanesifiso ngokuvakashela ezinye izindawo ezijabulisayo nge isitimela, makaqhubeke Ukufundwa 7 Kuhle Day Uhambo Kusukela Venice E-Italy!
1. Omunye Of Okungcono Kunakho Konke Day Uhambo Kusukela Venice kuyinto: Verona
Verona wukuthi idolobha elilodwa imilingo ku Veneto esifundeni, Northern Italy wonke umuntu uyazi. Shakespeare wakwenza okuphakade lapho enquma ukuyisebenzisa njengoba indawo abadumile Romeo and Juliet play wakhe. Namuhla, edolobheni uthandwa kakhulu, futhi unelungelo eligcwele ukuba.
Uzothola Verona kakhulu olunothile, futhi ingenye izindawo umhlabeleli ngoba uhambo usuku kusukela Venice. Uma ufuna ukuya khona ngesitimela, uyokuthola kube engcono inketho esheshayo lapho uya kusuka Venice.
Labo abathanda Italy ukwazi ukuthi Florence ingenye izindawo ezingcono ukuvakashelwa. Libuye omunye izindawo best ukuvakashela ku uhambo ngokugcwele ngosuku kusukela Venice.
Abantu abaningi bagcina okhohlwa bakwazi ukufinyelela kuwo kusukela Venice ngoba kancane ngokuqhubeka. Nokho, ungakwazi ukufinyelela Florence kusukela Venice ngamahora amabili kuphela ugibele isitimela ngesivinini. Ngaleyondlela, uzophinde uthole ukubona eziningi namathafa emangalisa ehlakazekile yonkana izwe phakathi Venice, nase-Florence.
Izinto eziyinhloko uzothola okuhlangenwe nakho e Florence kukhona ezitaladini ezikhangayo futhi abaziwa umhlaba wonke Florence Cathedral noma Duomo ukwenza Firenze. Uma ubuka ukuthi, Florence iba yindawo ezikhangayo zonke izihambi.
3. Omunye Of Okungcono Kunakho Konke Day Uhambo Kusukela Venice: wasePadua
Akuwona wonke umuntu uyazi mayelana WasePadua (Italian: Padova), kodwa namanje lendawo eyodwa yosuku phezulu sisuka Venice. Lokhu kungenxa yokuthi leli dolobha has konke, umuzi omkhulu Italian idinga ukuba. Thina ngokwemvelo ukhuluma ngani ukudla okukhulu, izakhiwo emangalisa, futhi piazzas elimangalisayo.
Ukuhambisa Venice ukuba WasePadua kwenteka kancono nge isitimela ngoba ukuhamba egcina ezinye izindawo emangalisa e-Italy. plus, liphinde kukho kakhulu ukhululekile futhi esheshayo ezitholakala kuwe.
Uma ufika WasePadua, Qiniseka ukuthi uvakashele Prato della Valle city centre. Kuyinto omunye izikwele eyinhloko edolobheni, futhi ugcwele langa eziqoshiwe eyodwa awanakuziziba.
EMilan WasePadua Izitimela
Verona ukuze WasePadua Izitimela
Bologna ukuze WasePadua Izitimela
Venice ukuze WasePadua Izitimela
Lake Garda iyona ichibi elikhulu kunawo wonke e-Italy. Libuye omunye edume kakhulu. Futhi unesizathu esizwakalayo kube. Leli chibi lizungezwe zonke uhlobo ubuhle anganikeza. Uzothola magnolias, cypresses, kugcwele izihlahla zikalamula yonke, yeminqumo, Dolomite izintaba kanye nokunye okuningi ezungeze iChibi Garda.
Ungakwazi ukufinyelela emadolobheni amaningana ogwini echibini kusukela Venice. Nokho, sinomuzwa wokuthi ezimbili best usuku sisuka Venice iChibi Garda kudingeka zihlanganisa imizi Peschiera futhi Sirmione. Ukuze afike khona kanye Lake Garda, ungathatha omunye izitimela eziningana ukuthi ikhefu Venice nsuku zonke.
5. Omunye Of Okungcono Kunakho Konke Day Uhambo Kusukela Venice: Siena
Akuwona wonke umuntu uyazi mayelana Siena, kodwa akuyona edolobheni ufuna miss. Kuyinto jewel Tuscany futhi iningi oyingqayizivele langa edolobheni medieval oyoke uthole ukubona.
Lihlanzekile leli dolobha futhi encane, kodwa lalidume yayo ezitaladini cobbled kanye omangalisayo esigcawini main eyaziwa ngokuthi Piazza del Campo. Futhi, evelele Magnia Tower imi ukuthi square efanayo, futhi kuba isakhiwo ende kunazo zonke iphakeme uzobona Siena.
I ngesitimela kancane isikhathi eside njengoba edolobheni okude. Nokho, kusukela Siena incane, usengakwazi an amazing usuku uhambo kusuka Venice uma unquma ukuya khona.
Venice ukuze Siena Izitimela
Siena akulona idolobha omangalisayo kuphela Tuscany. San Gimignano ungomunye. Zombili zingezakhe UNESCO amagugu wezwe amasayithi, kodwa San kuphela Gimignano kungaba ukwethusa nawe skyline yayo eyenziwe kwemibhoshongo eminingi yangenkathi ephakathi. Kuyinto ngempela emehlweni ukubona nokukodwa ungeke uyikhohlwe.
Ngokwemvelo, ungavakashela idolobha nge isitimela njengoba kuyindlela elula futhi esheshayo ukufinyelela isayithi Venice. Ngaphezu kwalokho, uzophinde uthole ukubona eshiwo ngenhla skyline ezinde kusukela induduzo lamadolobha esimanjemanje isitimela Italian.
Venice eSan Gimignano Izitimela
Trieste iyinhloko-dolobha ye-Friuli Venezia Giulia esifundeni kanye namanga komngcele Slovenia. It has a isikhundla esiyingqayizivele lonke elase-Italy futhi ubelokhu ingxenye yezwe ngoba ngokulambisa 70 iminyaka. Ngenxa yalesi, Trieste ukuxuba eziyingqayizivele amathonya amaningana aseYurophu.
Nokho, ukuthi ukuxuba eliyenza akhethekile omangalisayo indawo ukuvakashelwa. Ungakwazi ukufinyelela edolobheni kalula nge isitimela esuka Venice. Lonke Ukugibela imfushane kakhulu, kodwa kubalulekile ingxenye ukuthi unqamula ogwini amahle Italy. Konke lokho nakanjani kwenza kube yindawo enhle kakhulu ngoba omunye usuku lwakho sisuka Venice.
Venice ukuze Trieste Izitimela
ERoma Trieste Izitimela
EMilan Trieste Izitimela
Florence ukuze Trieste Izitimela
Ukhiye Takeaways Mayelana Kuhle Day Uhambo Kusukela Venice
Sekukonke, Venice itholakala kuphela osesimweni. Uthola zokuhambela izindawo eziningi ezithakazelisayo yonkana esiningi Italy kalula. plus, ukuthi indawo efanayo ivumela zonke lezi usuku sisuka Venice futhi abaningi.
Uma usukulungele ukuqala enye yalezi ezamehlela, konke okudingayo ukuze ukwenze thatha uya khona intandokazi. Khona-ke zonke okungukuthi Ngakwesokunxele ngawe ukwenze nje ukuya esiteshini sesitimela. Uma unemibuzo engeziwe, ukhululeke ukuthintana Londoloza Isitimela, futhi siyojabula ukusiza.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “7 Kuhle Day Uhambo Kusukela Venice E-Italy” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-day-trips-venice%2F%3Flang%3Dzu ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
europetravel GardaLake wasePadua trainjourney travelflorence travelitaly Trieste Verona